OnePlus က Samsung ကိုလဲလှယ်ပေးဖို့ OnePlus2ကိုပေးသည် Androidsis
OnePlus ကသင့်ကို Samsung ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလဲလှယ်ပေးဖို့ OnePlus2ကိုပေးသည်
Oneplus ၌တစ်ခုခုရှိပါက၎င်းတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကောင်းတစ်ခုရှိသည်။ စားသုံးသူသည်တစ် ဦး ရနိုင်ခြင်းအတွက်အရူးသွားပေမယ့် ဖိတ်စာ ကုမ္ပဏီမှနောက်ဆုံးပေါ်စမတ်ဖုန်းကို ၀ ယ်ရန်၊ သုံးစွဲသူများ၏ရဲစွမ်းသတ္တိကိုတရုတ်ထုတ်လုပ်သူကမည်သို့ကစားစေလိုကြောင်းယခုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပြီ။ ထို့ကြောင့်သူကပေးသောအကြံဥာဏ်ရှိပြီးနည်းပညာကဏ္sectorအတွက်လူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်ဖိုရမ်များအကြောင်းပြောဆိုရန်များစွာပေးခဲ့သည်၊ ၎င်းသည် Samsung စမတ်ဖုန်းအတွက် OnePlus2ကိုရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။
hashtag အောက်မှာ #TakeTheEdgeOff, ထုတ်လုပ်သူ OnePlus2အတွက်ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်၏ terminal ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသော Samsung အသုံးပြုသူများကိုတောင်းဆိုသည်။
Samsung မှ OnePlus နှင့်ကောင်းသောအကြောင်းရင်း
ထို့ကြောင့်တစ် ဦး ရှိသည်သောသူတို့အားအသုံးပြုသူများ Galaxy S6၊ Galaxy S6 Edge၊ Galaxy S6 Edge + သို့မဟုတ် Galaxy Note 5, စမတ်ဖုန်းများလဲလှယ်မှုအသစ်ကို ၀ င်ရန် OnePlus မှရွေးချယ်သောသူများဖြစ်သည်။ ဒီတော့ သာ 50 ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏စက်ကိရိယာများကို OnePlus ရုံးများသို့ပို့ရန်ရွေးချယ်ခံရသူများဖြစ်ပြီးအသစ်တစ်ခုဖြစ်သောအကျိုးအမြတ်မယူသော OnePlus2ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ရုံးခန်းများသို့ရောက်သော Samsung ဆိပ်ကမ်းများမှာ မျှော်လင့်ဖုန်းများအသင်းအဖွဲ့အတွက်ခွဲဝေလိမ့်မည်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိစမတ်ဖုန်းများစုဆောင်းခြင်းအားဖြင့်တတိယကမ္ဘာနိုင်ငံများအားကူညီသည့်စည်းလုံးညီညွတ်မှုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး။
ဒီမြှင့်တင်ရေး၏အခြေအနေများကြားတွင်အသုံးပြုသူဖြစ်ရမည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူOnePlus ရှိတိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်သည် သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းကိုဖြန့်ဝေ, အမည်ရှိစမတ်ဖုန်းတစ်ခုရှိသည် ယခင်ကသော စက်အလုပ်လုပ်တယ်သင့်ရဲ့ရှိသည် မူရင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ နှင့်၎င်း၏ loader y ပုံစံကိုဖြည့်ပါ သော OnePlus ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာသည်နှင့်နေ့ရက်ကာလအကြားကပေးပို့သည် အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်မှ ၁၈ ရက်အထိ။ မြှင့်တင်ရေးကိုပိတ်လိုက်ပြီးတာနဲ့သူတို့ဟာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့သူတွေကြားမှာအနှံ့အပြားရောက်သွားလိမ့်မယ် အသုံးပြုသူ ၅၀ သာရွေးချယ်လိမ့်မည် ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဒီမြှင့်တင်ရေးရိုက်ထည့်ရန်။
OnePlus ကအလိုအပ်ဆုံးသူတွေကိုကူညီချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီဖုန်းကိုမျှော်လင့်တယ်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးအသင်းအတွက်ငွေအမြောက်အမြားစုဆောင်းနိုင်အောင်ဒီ #TakeTheEdgeOff ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဤနေရာတွင်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် ၀ င်ရောက်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းရွေးချယ်ထားသည့်သုံးစွဲသူများသည် OnePlus2အသစ်ကိုရရှိပြီးသူတို့၏ Samsung ဆိပ်ကမ်းဟောင်းမှစုဆောင်းထားသောငွေများသည်အသင်းအဖွဲ့သို့သွားသည်။ Samsung မိုဘိုင်းဖုန်းများသည်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍ စျေးကြီးသည်ကိုငါတို့သိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ သင်ကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုအတွက်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိ Samsung အတွက် OnePlus2ကိုသင်ရောင်းဝယ်မည်လား ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » OnePlus » OnePlus ကသင့်ကို Samsung ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလဲလှယ်ပေးဖို့ OnePlus2ကိုပေးသည်
ငါကလုပ်ပေးလိမ့်မယ်၊ ဒါက hard x pesetas ကိုပြောင်းလဲသလိုပဲ!
ဟားဟား၊ ပိုပြီးယုတ္တိရှိတယ်၊ ဈေးလည်းသက်သာတယ်၊ ဒါပေမယ့် ၂ OPT အတွက် ၁ samsung s1 လိုဖြစ်ရမယ်။
Joselito ပါ ဟုသူကပြောသည်
Hohahaha ကဒီ oneplus ဟာနို့ပဲ။ သင် OPO2 အတွက်နောက်ဆုံး Samsung ကိုပြောင်းဖို့မိုက်မဲနေရမယ်။
blas rye ဟုသူကပြောသည်
သူတို့က oneplus အတွက်ကွေး 800 ကိုမပြောင်းတဲ့အတွက် 250E အတွက် 8520E ပြောင်းလဲမှုလို asshole လည်းမဟုတ်ပါ
blas rye အားပြန်ပြောပါ
LG သည် Android 6.0 Marshmallow ကိုလာမည့်အပတ် G4 တွင်စတင်ရောင်းချမည်
Meizu M2 သည်စျေးနှုန်းချိုသာသောအလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်ဖြစ်သည်